‘धम्की मात्र दिएको हो, नाकको हड्डी भाँचेको त छैन नी !’ मेयर | Makalukhabar.com
‘धम्की मात्र दिएको हो, नाकको हड्डी भाँचेको त छैन नी !’ मेयर
इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरी सर्वत्र चर्चामा छन् । चर्चामा यस कारण कि उनले आफ्नै कार्यालयका कर्मचारीलाई कार्यस्थलमै झापड लगाए । कर्मचारीलाई झापड किन हानेको ? भनेर पत्रकारले सोध्दा उल्टै पत्रकारलाई लोपारी दिए । मेयर चौधरीले स्थानीय पत्रकार विराट अनुपमलाई १ करोड खर्च गरेर नाकको हड्डी नै भाँच्ने धम्की समेत दिए । मेयर चौधरी र पत्रकार विच किन दुरी बढिरहेछ ? उनी किन जंगे शैलीमा उत्रँदैछन् ? त्यस्तो के कारण थियो मेयरले १ करोड खर्च गरेर पत्रकारको नाकको हड्डी नै भाँच्नुपर्ने भयो । मकालु खबरले नेपालगञ्जको कार्यक्रमबाट सिधै राजधानी आएका मेयर चौधरीसँग बुझ्ने चेस्टा गर्यो ।
मेयर द्वारिकलाल चौधरी, इटहरी उपमहानगरपालिका, फाेटाे, सामाजिक सञ्जालबाट
तपाई जहिल्यै चर्चामा किन ?
यहाँ पत्रकार सबै राम्रा छैनन् । यहाँ पित पत्रकार गर्ने पनि छन्, गल्ति नभएका कुरामा पनि आरोप लगाउँछन् । विराट अनुपम भन्ने एकजना पत्रकारको समुह मलाई सिध्याउन भन्दै लागि परेका छन् । २ बर्षअघि देखिनै उनीहरु म प्रति नकारात्मक छन् । स्थानीय तहको चुनाव अघिनै मेरो चरित्र हत्या गरेर चुनाव हराउन लागि परे । तर, म स्थानीय तहमा लोकप्रिय भएकोले भारी मतले चुनाव जिते । त्यो उनीहरुलाई सह्य भएन । त्यसैले मेरो चरित्र हत्या गर्न लागेका हुन् ।
मैले त धम्की मात्र दिएको हो ! मारेको वा नाकको हड्डी भाँचेको त छैन नी !
पत्रकारको नाकको डाँडी भाँच्न १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याउनुभएको छ । प्रत्यक्ष ज्यान मार्ने धम्की दिँदासमेत राज्यको कानुन आकर्षित हुँदैन ?
मैले जवाहरलाल नेहरुको ईतिहास पढेको छु । उहाँले आफुप्रति नकारात्मक लेख्ने पत्रकारलाई बोलाएर धन्यबाद भन्नुहुन्थ्यो । मेरो पनि त्यही चाहना थियो । आफ्नो विरुद्धमा प्रायोजित समाचार लेख्ने, मेरो बारेमा नभएका कुरा लेख्ने पत्रकारलाई एक दुई पटक त धन्यबाद नै दिए । त्यो व्यङ्ग्य स्वरुप थियो । तर, उनीहरु मेरो कमजोरी सच्याउन नभई मेरो राजनीति समाप्त पार्न लागेको थाहा पाए । भए नभएका कुराहरु लेख्ने, चरित्र हत्या गर्दै आए । अनी म जँगिएको हुँ ।
देशमा विधिको शासन छैन ? तपाईले मेयर भएर जे पनि गर्ने छुट छ ?
मैले त भाँच्छु भनेको मात्र हो । उता विराटनगरमा त एउटाको नाकको हड्डी नै भाँच्दियो कसैले । जनयुद्धमा डेकेन्द्र थापा पत्रकारलाई घाटी रेटेर हत्या गरियो । खै त्यो दोषिलाई कारवाही भयो ? मैले त धम्की मात्र दिएको हो ! मारेको वा नाकको हड्डी भाँचेको त छैन नी !
पत्रकारको नाक भाँच्छु भनेर किन धम्की दिएको ?
मैले त रिसको आबेगमा आएर भनेको हुँ । उनीहरुले मलाई २ बर्षदेखि चरित्र हत्या गर्न हुने । मैले त्यति धम्की दिन नहुने ? सहनुको पनि सीमा हुन्छ नी ? हातमा कलम छ भनेर जे लेख्दा पनि हुन्छ ? अरुको चरित्र हत्या गरेपछि त्यो पछि सुध्रिन्छ ? मैले ५० बर्षदेखि बनाएको असल छवी र चरित्र, त्यो पत्रकारले २ बर्षमा सिध्याउन मिल्छ ? मैले एकदिन उसलाई फेसबुकमा ‘चाटुकार’ भनेर लेखिदिए । उसले मलाई ‘किन त्यसो भनेको’ भन्यो अनी मैले धम्की दिएको हँु । कसैले भनेको नमानेपछि, कानुन र निती नियम नमानेपछी कहिलेकाँही तर्साउनु पनी पर्ने हुँदोरहेछ ।
तपाईले किन कर्मचारी कुट्नुभयो ? ईटहरी उपमहानगरको भ्रष्टचार काण्ड के हो ?
पहिला समाचार आयो, सिएफएल खरिदमा करोडौ रुपैयाँ घोटाला भयो । मेयर अख्तियारको फन्दामा छ भनेर अर्काे पटक समाचार आयो । त्यति मात्र होइन, मलाई पटक पटक नभएको विषयमा समाचार लेखियो । २ जना स्टोर किपरमा काम गर्ने फटाहा कर्मचारीले अनियमितता गरेका रहेछन् । तर, मलाई पत्रकारले भका–नभका आरोप लगाएपछि मलार्ई असैह्य भएको हो । केहीलाई अर्काे चुनावमा मेयर बन्न हतारो छ । यसैले केही ‘चाटुकार’ पत्रकारलाई उनीहरुले उचालेर मेरो विरुद्धमा खनिएका छन् ।
कर्मचारी भकुरेर भ्रष्टचार अन्त्य हुन्छ त ?
कहाँ कुटे मैले ? स्टोरकिपरलाई बोलाएर अनियमितता र सिएफएल बल्बको भुक्तानीको बारेमा सोेधे । उसले मलाई भन्यो, ‘तँ थारुको छोरालाई किन भन्ने, मलाई किन हप्की दप्की लाउने ?’ अनी मैले उसको कठालोमा समातेर झपारेको हो । तर, झापड भने हानीन । मैले अख्तियारमा समेत बयान दिएर, पहिला भएको भ्रष्टचारको बारेमा धेरै जानकारी दिएको छु । आशंका लागेका विषय अख्तियारलाई जानकारी गराएको छु ।
तपाई अरु कर्मचारीलाई भ्रष्टचारी भन्नुहुन्छ ? कर्मचारीले मात्र गर्छन त ? जनप्रतिनिधि विना भ्रष्टाचार कसरी संभव छ ?
म हिन्दु धर्मावलम्बी हुँ । मैले भ्रष्टाचार गरेको भए, गाईको मासु खाएको बराबर होस् । अहिलेपनि म आफ्नो पाखो बारीमा उव्जाएको तरकारी खान्छु । मलाई मिठो मसिनो खाने, राम्रो लाउने, ठूलो महलमा बस्ने ईच्छा छैन । मलाई सरकारले दिने तलबले पुग्छ । म अहिले कोठामा बसेको छु । चुनावमा ऋण लागेको छ । व्यापार व्यवसाय केही छैन । चुनाव खर्चको लागी मैले जग्गा बेचेको छु, कति ऋण तिर्न बाँकी छ । मेयरले राम्रो खायो भने, भ्रष्टचार गरेर खायो । राम्रो लायो भने भ्रष्टाचार गरेर लायो भन्ने परिपाटी छ ।
कुनै नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा कुनै पदाधिकारीलाई लाञ्छना लगाए प्रहरीले पक्राउ गर्छ । तर, तपाई अरुलाई विना प्रमाण भ्रष्टाचारी भन्दै बेइज्यत गर्दा पनि खुलेआम हुनुहुन्छ कसरी ?
मसँग भ्रष्टाचारीको लिष्ट छ । प्रमाण पनि छ । यसैले आरोप लगाएको हुँ । मैले भ्रष्टचारीलाई कालोमोसो दल्दा कारवाही हुन्छ भने म भोग्न तयार छु । जहाँ भ्रष्टाचारीलाई कानुन संम्मत कारवाही हुँदैन, त्यहाँ केही कानुन हातमा लिएर पनि जनकारवाही गर्न मिल्छ । यसमा कसैले अन्यथा मान्नु पर्दैन ।
मेयरले यस्तो धम्की आवेशमा आएर दिएको देखिँदैन । मेयर जस्तो पदमा बसेर यस्तो धम्की दिन सुहाउँछ ?
म मेयर भएँ भन्दैमा जे गर्न पनि छुट छैन, मलाई पनि कारवाही भए भोग्न तयार छु । अदालतले जस्तो कारवाही गर्छ त्यो भोग्न तयार छु ।
मैले पनि नाक भाँच्छु भनेर आबेशमा आएर भनेको हुँ । मलाई जे सजाय हुन्छ म त्यो सहन तयार छु ।
पत्रकारलाई किन झपारेको ?
मैले झपारेको होईन । जे पायो तेही लेख्यो, राम्रो कुरा गर भनेको हो । ‘भाई मलाई जे पायो त्यही कुरा नगर है, म लोपार्छु’ भनेको थिएँ । फेरी त्यही कुरा गरेर ‘ईरिटेड’ बनायो, अनी मैले लोपारिदिए । पत्रकारले कोठामा बसेर पनि शिष्टाचार रुपमा सोध्न सक्छ नी । बाटोमा घेरेर जे पायो त्यही मनपरी सोध्ने ? पत्रकार हुँ भन्दैमा शिष्टाचार हुनुपदैन ? उनीहरुले मलाई मनपरी तथानाम बोलेर सोधे, मैले लोपारेको हूँ ।
अपराध संहिताअनुसार कसैले कसैलाई होच्याउने नियतले बोली वा वचनले अपमानजनक शब्द प्रयोग गरे एक वर्षसम्म कैद वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । तपाई सजायँ भोग्न तयार हो ?
म कानुनको विद्यार्थी होईन । तर, मलाई मलाई सबै कानुन थाहा छ । अदालतले के भन्छ भने, कसैलाई हत्या गरेपनि हत्या गर्ने मनसायले कसैले हत्या गरेको हो कि, भवितव्य रुपमा भएको हो त्यो हेर्छ र त्यो अनुसार सजाय तोक्छ, मैले पनि नाक भाँच्छु भनेर आबेशमा आएर भनेको हुँ । मलाई जे सजाय हुन्छ म त्यो सहन तयार छु ।
कानुनी शासनको खिलाफमा जाने तपाईको शक्तिको स्रोत के हो ? खुला धम्की र कानुनविपरीत अभिव्यक्ति प्रति सरकारको मौनता कि, पार्टीले के भनेको छ ?
मैले शंकर पोखरेल, योगेश भट्टराईको पनि फेसबुक हेरें । उहाँहरुले माफि माग्नुपर्छ भनेर लेखेको देखे । उहाँहरु मेरो नेता हो । उहाँहरुलाई सम्मान गर्छु म । तर, चाटुकारहरुले जे पायो त्यही लेखेको कुरा पत्याए मलाई भन्नुभएको छ । मलाई पनि उहाँहरुले सोधेर भन्नुभएको होइन । कसैले होच्याएर, स्याल हुईया मच्चाएर कारवाही गर्नुपर्छ भनेर हुन्छ ?
पार्टीले कारवाही गर्याे भने के गर्नुहुन्छ ?
कारवाही भए म भोग्छु । किसानको छोरा हुँ । बारी खनेर पनि खान्छु । बारी खनेर खाएर पनि जनताको सेवा गर्न सक्छु म । तर, मलाई कारवाही हुन्छ भन्ने कुरा विश्वास छैन । मलाई कसैको चाकडी चाप्लुसी गर्नुपनि छैन । गर्दिन पनि ।
पत्रकारसँग तपाईको मुख्य गुनासो चाहीँ के हो ?
प्रायोजित समाचारको लागी मलाई राजनीतिक जीवनमा क्षती भयो । त्यो क्षतीपुर्ती मलाई पत्रकारले दिन्छ ? मलाई देशभरीकाले फटाहा मेयर भन्छन् ? त्यो क्षतीपुर्ती कस्ले दिने ? म कस्तो प्रकृतिको मान्छे बुझ्न इटहरीका जनतालाई सोध्नुस् । उनीहरुले नराम्रो भने म फाँसीमा चढ्न तयार छु । हिजो खैनी खान नपाएका मान्छेहरु आज महलमा बस्छन् । त्यो कहाँबाट आयो ? हो त्यस्ता मान्छेलाई कारवाही भएन भने म कालोमोसो दल्छु भनेको हो ।
किन तपाईलाई यसरी अत्याधिक रिस उठ्छ ?
कसलाई रिस उठ्दैन, भोलेबाबा शंकरलाई त उठ्छ । म त एक जना मान्छे हुँ । उठ्छ ।
तपाईले कसैको नाक भाँच्ने धम्की दिँदा तपाईकै आफ्नो नाक जोगाउन सक्दिन कि भन्ने लाग्दैन ?
मेरो नाक सधैं उँचो छ । मेरो नाक जोगाउने जनता छन् । मैले कति काम गरेको छु जनतालाई सोध्नुस् । केही प्रायोजित समाचारमा के लेखेको छ भनेर थाहा हुँदैन ।
‘स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न एक कर नीति ल्याउनु पर्छ’ कृष्ण प्रसाद दुलाल
मुलुकले सोचे अनुरुप आर्थिक बृद्दिदर हासिल गर्न नसक्नुमा धेरै कारणहरु छन् । अस्थिर राजनीति, ठूला क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीको अभाव, ब्यवसायीक असुरक्षाका कारण खुलेका उद्योग कलकारखाना समेत धरासायी भइरहँदा मोरङको विराटचोकमा स्थापीत पूर्वाञ्चल ल्युव आयल प्रा.लि.ले भने ब्यवसायीक सफलता हासिल गर्दै आइरहेको छ ।... जारी राख्नुहोस...
अब पार्टीमा अध्यक्षज्यूहरुको मात्र हालिमुहाली हुँदैनः भीम रावल
साउन २०, काठमाडौं ।कुटनीति मर्यादा तथा हाम्रो स्वाधीनताको दृष्टिबाट कुनै देशको गुप्तचरलाई ठूलाठूला पदमा बसेका र राज्यका महत्वपूर्ण पदमा बस्ने व्यक्तिहरुले त्यसरी भेट्नु भनेको देशको शीर निहुर्याउने काम हो । खरो रूपमा राजनीतिमा उत्रने छवि बनाएका सत्तारुढ नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता भीम रा... जारी राख्नुहोस...
साउन १४, विराटनगर । गर्मीको मौसममा विशेषगरी तराईमा विभिन्न किसिमका रोगहरु फैलिन्छन् । हुन त गर्मीमा जुनसुकै ठाउँमा पनि विभिन्न रोगहरुको प्रकोप देखा पर्छन् । त्यसमाथि पनि प्राकृतिक प्रकोपका कारण पनि विभिन्न रोगहरु फैलिरहेका हुन्छन् । विशेषगरी तराईमा फरक खालका रोगले ब्यक्तिहरु संक्रमित भइरहेका हुन्छन... जारी राख्नुहोस...
‘इक्यानको शैक्षिक मेला विद्यार्थीको भविष्य बनाउने गोरेटो हो’
गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा वर्षेनी हजारौं विद्यार्थी विदेशिइरहँदा शैक्षिक परामर्श ब्यवसायीलाई नेपाली विद्यार्थी पलायन गराएको आरोप लाग्ने गरेको छ । तथापि, नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष विष्णुहरि पाण्डे भने यो कुरा मान्न तयार छैनन् । उनी नेपाली विद्यार्थीले विश्व बजारमा गएर उच्च शिक्षा... जारी राख्नुहोस...
‘शैक्षिक मेलाले अन्तराष्ट्रिय शिक्षाको महत्व दर्शाउँछ’
दीपक राज भुसाल, इक्यान सचिव, संयोजक, १३ औं इक्यान शैक्षिक मेला विगतको शैक्षिक मेला र यस पटकमा के फरक छ ? इक्यानले हरेक वर्ष आयोजना गर्ने शैक्षिक मेला विशिष्ट र फरक भइहाल्छ । यसपटक विगतको भन्दा पृथक, ब्यवस्थित तथा अभिभावक, विद्यार्थी तथा शैक्षिक परामर्श ब्यवसायीलाई नै प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने हिसाबले... जारी राख्नुहोस...
धरानकाे खस्कँदो ब्यवसाय उकास्नु मेरो योजनाः मान बहादुर दियाली
उद्योगी ब्यापारीहरुको साझा संगठन सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघको जेठ २७ गते हुन लागेको निर्वाचनमा बराह ज्वेलरी ईण्डष्ट्रिज प्रा.लि. धरान शाखा प्रमुख मान बहादुर दियालीले वाणिज्य तर्फको सदस्य पदका लागि उम्मेद्वारी दिएका छन् । निबर्तमान कार्य समिति सदस्य तथा संघको सल्लाहकार समेत रहेर काम गरिसकेका दियालीले... जारी राख्नुहोस...
‘म फुल टाइम संघमा काम गर्नकालागि आउन चाहन्छु’
सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनको सरगर्मी बढेको छ । यहि जेठ २७ गते हुन गइरहेको निर्वाचनमा आकांक्षीहरुको भिडमा उभिएका छन्, युवा ब्यवसायी दिनेश चाम्लिङ राई । तायोमा सप्लायर्सका दिनेश चाम्लिङ राईलाई लागुपदार्थ दुब्र्यसनमा लागेका युवाहरुलाई सुधार्ने उदाहरणीय ब्यक्तिका रुपमा लिइन्छ । रिकभरिङ धरानको... जारी राख्नुहोस...
चन्द्रागिरी रेडक्रस भित्र देखिएको राजनीति अन्त्यका लागि मेरो उमेद्वारीः राजेश घिमिरे
जेठ १०, काठमाडाैँ । विस २०३० चन्द्रागिरी १२ बलम्बुमा जन्मेका राजेश घिमिरे सामाजिक अभियान्ता हुन् । सहकारी क्षेत्र, रेयुकाई, सर्भिस सिभिल ईन्टरनेश्नल र विभिन्न व्यापार व्यवसायमा लागेर चन्द्रागिरीको विकास र विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकाे घिमिरे सन् २००४ मा नेपाल रेडक्रम सोसाईटी पश्चिम भेग राजमार्... जारी राख्नुहोस...
काउन्सिलको स्वायत्ततालाई मन्त्रालयको मुठ्ठीमा पार्न खोजियो
सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गरेको प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयकको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत प्रेसमाथि अंकुश लगाउन लागेको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीसहित नेपाल पत्रकार महासंघ नै आन्दोलनमा उत्रेको छ । सरकारकै भ्रष्टाचार र विकृतिको विषयमा मिडियामा समाचार आउन थालेपछि सरकारल... जारी राख्नुहोस...
'निर्वाचनको जस लिने, हारेको अपजस चाहीँ लिनु पर्दैन ?'
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादकाबीच राष्ट्रिय जागरण अभियानमा जुटेको छ । महाधिवेशन भएको ३ वर्ष बढी हुँदा समेत पार्टीका विभिन्न संरचना गठन हुन नसकिरहेको बेला कांग्रेसले देशव्यापी जागरण अभियान सुरु गरेको छ । पार्टी संगठनलाई चलायमान बनाउँदै सरकारविरुद्ध जनमत निर्माण गर... जारी राख्नुहोस...